SHANDISA YOUTUBE UCHISHANDISA YOUTUBE.COM/ACTIVATE (2021) - NYORO
Shandisa YouTube uchishandisa youtube.com/activate (2021)
YouTube ndiyo yekuenda kuchikuva chevanhu vazhinji kuti vatarise mavhidhiyo muchizvarwa chemazuva ano. Kunyangwe iwe uchida kuona inodzidzisa dzidziso, kana mabhaisikopo, kana kunyange webhu nhevedzano, YouTube inayo, uye nekudaro, ndiyo inonyanya kufarirwa kushambadzira vhidhiyo uye yekushambadzira saiti kunge ezuva.
Nepo iwe uchikwanisa kutarisa YouTube pane chero smartphone chero bedzi iine rutsigiro rwevhidhiyo uye neinternet kubatana uyezve pamakomputa ane browser inotsigirwa neinternet yekubatanidza, kutarisa YouTube paTV imwe yakasarudzika. Rutsigiro rweYouTube pane smart TVs chikomborero kune wese munhu.
Kunyangwe iwe usina TV ine android OS kana smart TV, kune nzira dzakawanda dzekuona YouTube pane yako terevhizheni. Paunenge uchibatanidza TV yako kumakomputa ndiyo sarudzo iri pachena, unogona kushamisika kuziva kuti unogona kubatanidza Roku, Kodi, Xbox One kana PlayStation (PS3 kana kuti gare gare) kutenderera mavhidhiyo eYouTube chaipo paTV yako.
Unogona kushamisika kuti iwe uchapinda sei muakaundi yako yeGoogle pane izvi zvishandiso kuti uwane nzira dzako dzakanyoreswa uye zvinyorwa zvekutamba? Ndipo panowanikwa youtube.com/activate mumufananidzo. Iyo inobvumidza kumisikidza yako YouTube account pane vezvenhau vatambi kana zvinyaradzo zvinotsigira chiitiko ichi uye nekudzora dambudziko rekuda Google account kupinda-mukati.
Asi unoishandisa sei? Ngationei.
yemunharaunda nharaunda kubatana haina kodhi ip kero
Maitiro ekumisikidza YouTube uchishandisa youtube.com/activate
Maitiro 1: Shandisa YouTube paRoku
Maitiro 2: Shandisa YouTube pane Samsung Smart TV
Maitiro 3: Shandisa YouTube pane Kodi
Maitiro 4: Shandisa YouTube pane Apple TV
Maitiro 5: Shandisa YouTube pa Xbox Rimwe pamwe neXbox 360
Maitiro 6: Shandisa YouTube paAmazon Firestick
Maitiro 7: Shandisa YouTube pane PlayStation
Maitiro 8: Shandisa YouTube pane smart TV
Maitiro 9: Shandisa Chromecast kuyerera YouTube kuTV
Nenyaya ino, isu tichaedza kuzivisa vaverengi vedu nepatinogona napo nhanho dzaunoteedzera kumisikidza YouTube pane vamwe vevanozivikanwa vezvenhau vatambi uye vanyaradzi vachishandisa youtube.com/activate
Maitiro 1: Activate YouTube paRoku
Roku idanda rekushambadzira raunokwanisa kubatanidza kuTV yako uye neinternet kubatana, kuyerera kunoratidza, mabhaisikopo, uye mamwe midhiya kwairi. Kugonesa YouTube paRoku:
Kutanga, taura yako Roku rwizi rutanda kuTV yako. Kubatana kweWi-Fi kunodiwa. Paunenge wakabatana, pinda muakaundi yako yeRoku.
Pinda iyo Screen Screen nekudzvanya bhatani reKumba pane yako Roku kure.
Sarudza Chiteshi Chitoro uye tinya bhatani OK pane yako Roku kure.
Pasi PeMahara Yemahara, sarudza YouTube uye dzvanya OK pane yako iri kure.
Sarudza iyo Wedzera Chiteshi sarudzo uye pinda OK.
Paunopedzisa danho rekupedzisira, YouTube ichawedzerwa kune ako chiteshi. Kana iwe uchida kutarisa kuti YouTube yakawedzerwa zvinobudirira here kana kuti kwete, tinya bhatani reKumba pane iri kure uye enda kuChannel Changu. Iyo YouTube chiteshi inofanirwa kunge iri pane runyorwa rwemagero.
Vhura iyo YouTube Chiteshi.
Zvino sarudza iyo Gear icon iri kuruboshwe kuruboshwe rweiyo YouTube chiteshi.
Zvino, sarudza Sign in uye nyora yako Google / YouTube account account.
Roku icharatidza kodhi ine manhamba masere pachiratidziri.
Zvino enda ku youtube.com/activate pane yako laptop kana foni uchishandisa browser inotsigirwa.
Pinda yako Google account ruzivo kana usati watopinda mukati uye wapedza iyo yekupinda-mukati maitiro.
Pinda kodhi ine manhamba masere ayo Roku ari kuratidza mubhokisi uye zadzisa iyo activation.
Dzvanya Bvumira kuwana kana iwe ukaona chero yakadaro yekukurumidza. Iwe ikozvino wabudirira kumisikidza YouTube pane yako Roku rwizi rutanda uchishandisa youtube.com/activate.
Kana iwe uine Samsung Smart TV, uchafara kuziva kuti ine imwe yekukurumidza nzira yekumisikidza YouTube. Kuti uite kudaro,
Kutanga TV, uye ita shuwa kuti ive inoshanda yeWi-Fi kubatana. Vhura iyo Smart TV app chitoro pane Samsung TV.
Tsvaga iyo YouTube app uye uvhure.
Iyo YouTube app, kana ikavhurwa, icharatidza manhamba masere ekugadzirisa kodhi pane yako TV skrini.
Vhura bhurawuza rako pane smartphone kana PC uye enda kuYouTube.com/activate. Ita shuwa kuti wapinda muakaunti yako yeGoogle / YouTube usati waenderera.
Nyora iyo activation kodhi iri kuratidzwa pane Samsung Smart TV skrini.
Dzvanya pane Inotevera sarudzo.
Kana paine chiriporipocho kubvunza kana iwe uchida Samsung TV kuti iwane yako account, enderera nekutendera iyo. Iwe ikozvino une YouTube yakamisikidzwa pane yako Samsung Smart TV.
Kodi (yaimbozivikanwa seXBMC) ndeye yakavhurika-sosi midhiya mutambi uye software yevaraidzo. Kana iwe uine Kodi pane yako TV, iwe unofanirwa kuisa iyo YouTube plugin kutanga usati waita YouTube kuburikidza youtube.com/activate. Heino nhanho-nhanho-gwara nezve maitiro ekumisikidza YouTube pane Kodi:
Kutanga, tsvaga iyo sarudzo Wedzera-mairi uye gadza kubva pano: Repository / Get Wedzera-ons.
Sarudza iyo Kodi Wedzera-paRefodhi.
Shandisa sarudzo Vhidhiyo Wedzera-ons.
Sarudza YouTube uye tinya gadza izvozvi. Iyo yekumisikidza maitiro inogona kutora mineti kana maviri kuti apedze. Kuchengetedza internet yakagadzikana inokurudzirwa.
Kana kumisikidza kwapera, enda kuKare - vhidhiyo - Wedzera-pa - YouTube. Vhura iyo YouTube app.
Iwe unozowana kodhi yekuvimbisa manhamba masere pane yako skrini.
Vhura iyo peji rewebhu www.youtube.com/activate pane chero komputa kana smartphone.
Pinda kodhi ine manhamba masere yawaona pakuratidzwa.
Dzvanya paPfuurira bhatani reYouTube kupedzisa kumisikidza Kodi paYouTube.
Uyezve Verenga: Wepamusoro 15 Yemahara YouTube Dzimwe nzira - Vhidhiyo Saiti Senge YouTube
Sechinodikanwa, uchafanirwa kurodha pasi nekumisikidza iyo YouTube app pane yako Apple TV. Vhura chitoro cheapp uye wozotsvaga YouTube, isai. Paunenge wapedza, unogona kumisa YouTube seinotevera:
Vhura iyo YouTube app pane Apple TV.
Enda kune ayo marongero menyu.
Saina kuaccount yako uchishandisa sarudzo yakapihwa muMenu yeMenu.
Cherekedza pasi kodhi ine manhamba masere icharatidzwa neApple TV.
Shanyira www.youtube.com/activate pane imwe smartphone kana PC kwawakapinda iwe muakaunti imwechete yeYouTube seApple TV.
Nyora kodhi ine manhamba masere yawanyora pasi, uye ramba uchipedzisa iyo activation.
Kugadzira YouTube pane Xbox inzira yakatwasuka. Kungofanana neApple TV, iwe unotanga kuda kurodha pasi nekuisa iyo YouTube app kubva kuchitoro cheapp. Ukangoita izvo,
Vhura YouTube pane iyo Xbox.
Enda kuKusaina mukati & marongero
Sarudza Sign in uye wobva wadzvanya X bhatani pane mutongi.
Iyo YouTube app icharatidza kodhi-manhamba kodhi. Chero nyora pasi kana chengeta ichi skrini kuvhura sezvo iwe uchizoda iyi kodhi gare gare.
Shanyira iyo peji rewebhu youtube.com/activate kubva palaptop yako kana foni. Iwe unofanirwa kusainirwa mukati kune imwechete YouTube account seXbox. Kana iwe usina kusaina mukati, isa magwaro ako uye pinda mukati.
Kudzoka ku youtube.com/activate peji, isa iyo masere-digit kodhi inoratidzwa pa Xbox uye enderera.
Kana iwe ukaona yekusimbisa inokurumidza kukumbira yekusimbiswa kana uchida kubvumira Xbox kupinda kuaccount yako, tinya pane Rega uye enderera.
Amazon Fire Stick inobvumira vashandisi kuyerera kubva kumasevhisi seNetflix, Amazon Prime Vhidhiyo, uye ikozvino YouTube yakananga kuTV yako. Kugonesa yako YouTube account paAmazon Fire Stick,
Pane iri kure yeAmazon Fire TV, tinya bhatani repamba
Enda kuchitoro cheAmazon.
Tsvaga YouTube uye isa iyo.
Ungangoda kusaina kuakaundi yako YouTube.
Cherekedza pasi iyo masere-manhamba ekushandisa kodhi inoratidzwa pachiratidziri kana chengeta iyo skrini yakavhurika
Shanyira www.youtube.com/activate uchishandisa browser pane laptop, desktop, kana nhare. Ita shuwa kuti wapinda muakaundi yako YouTube usati waenderera.
Pinda kodhi yawakaona paTV skrini, woenderera. Kana iwe ukawana chero kukurudzira, tendera, uye enderera.
Uyezve Verenga: Zivhura YouTube Kana Ukavharirwa Mahofisi, Zvikoro kana Makoreji?
PlayStation, nepo ichikugonesa kuti utambe dzakasiyana siyana mitambo, zvakare inokutendera iwe kutenderera midhiya kuburikidza ayo akasiyana ekushambadzira maficha anowanikwa pane app chitoro. YouTube inowanikwawo, uye kuita YouTube paTV yako nekuibatanidza kune PlayStation, tevera pazasi matanho.
Vhura iyo YouTube app pane PlayStation. Ndokumbira utarise kuti chete PlayStation 3 kana gare gare inotsigirwa. Kana iwe usina app yakaiswa, vhura iyo app chitoro, uye utore pasi.
Paunenge iwe wavhura iyo app, enda Kunyoresa-mukati & marongero.
Sarudza iyo Sign-in sarudzo.
Iyo YouTube app zvino icharatidza kodhi ine manhamba masere. Cherekedza pasi.
Yese yemazuva ano Smart TV ine YouTube application yakavakirwa mukati mayo. Asi, mune mashoma mamodheru, inoda kutanga yatorwa kubva muchitoro cheapp. Ita shuwa kuti iwe une iyo yakaiswa usati waita aya matanho:
Vhura iyo YouTube app pane Smart TV.
Paunenge iwe wavhura iyo app, enda kuZvirongwa.
Google Chromecast isarudzo huru yekugovana zvikwangwani kana kutenderera multimedia kubva pane chimwe chinhu kuenda pane chimwe. Inonyanya kubatsira kana iwe uchida kuona chimwe chinhu pahwindo rakakura, sekukanda vhidhiyo kubva pafoni yako kuenda kuTV. Kana iwe uchinge uine zvinetswa neiyo YouTube app paTV yako, unogona kuisa Chromecast woishandisa kuona YouTube mavhidhiyo.
Ita shuwa kuti nharembozha yako kana piritsi raunoda kuyerera kubva kune imwechete network yeWi-Fi seChromecast.
Vhura iyo YouTube app.
Tinya bhatani reKanda. Inowanikwa kumusoro kweiyo App chidzitiro cheKumba.
Sarudza mudziyo waunoda kukanda, mune ino kesi, ichave yako TV.
Sarudza TV kana vhidhiyo.
Tinya pane bhatani reKutamba kana vhidhiyo ikasatanga kutamba otomatiki.
Uyezve Verenga: Maitiro Ekumisikidza YouTube Rima Mode
Isu tapedza matekinoroji aunogona kushandisa kumisikidza YouTube uchishandisa youtube.com/activate. Kana iwe ukasvika kumagumo-akafa pane imwe yeiyi nzira, unogona kutangidza TV yako, cheki uye wotangazve internet kubatanidza uye edza kutema kunze uye kupinda mukati zvakare neakaundi yako YouTube. Google yatipa iko kwoumbozha, uye ne youtube.com/activate, unogona kunakidzwa nemavhidhiyo akasiyana siyana eYouTube pahwindo hombe rakagara pasofa rako.
ficha yekuvandudza kune windows 10, vhezheni 1809 - kukanganisa 0x80070020
maitiro ekushandisa readyboost windows 10
windows 10 yekutanga menyu kukanganisa
man'a dzima mafaera echinguvana windows 10
default gedhi harisi kuwanikwa gadzirisa